Archive du 20180124
Romotra ny fitondrana Ravalo henjehina, ny Magro hakatona…
Mpitandro ny filaminana nirongo basy no natao fitaovana nanakanana ny fihaonan’i Marc Ravalomanana sy ny vahoakan’Ambovombe Androy omaly.
Fitondrana Rajaonarimampianina Tsy te hahalala ny antson’ny FFKM ?
Rehefa dinihina dia toy ny miteny hoe: “henoy izany ry hazon-damosiko” ny fanjakana HVM manoloana ny antso avo sy ny fanairana sesilany nataon’ny FFKM (Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara).
Kandida « Favoris » Te hampihemotra fifidianana, hoy ny DFP
Ireo Kandida goavana nitabataba maika hanao fifidianana tamin’ny taona 2016 sy 2017 avy amin’ny fitondrana sy ivelan’ny fitondrana mihitsy indray, hoy ny avy anivon’ny vovonana politika,
Ampy izay ny tsy rariny Hihetsika ireo miaramila misotro ronono
Leo ny fanaovan’ny fanjakana bemarenina sy tsy firaharahiana tsotr’izao ny fitakiany ny fikambanan’ny miaramila misotro ronono. Noho izany, dia hanao hetsi-pitakiana lehibe izy ireo manomboka anio alarobia 24 janoary, taorian’ny tsy nahatomombana ilay saika hatao ny sabotsy 20 janoary lasa teo.
Fanamboarana kara-panondro Nankaiza ny volabe 3 miliara ?
Efa tamin’ny herinandro ambony no nanao antso avo momba ny tsy fisian’ny taratasy fanaovana kara-panondro any amin’ny distrikan’Arivonimano ny depiote Rakotomanjato Rodin, saingy tsy nisy namaly.
Mponina etsy La Réunion kely Nampiesonin’ny fitondram-panjakana
Velon-taraina mafy ireo mponina etsy La Réunion kely amin’izao. Tsy mbola misy tonga eny am-pelatanan’izy ireo ihany mantsy ireo fanampiana nampanantenain’ny filoham-pirenena, taorian’ny nandalovany teny an-toerana.
Kaominina Ambavahaditokana Betsaka ny asa vita na dia tsy ampy tetibola aza
Betsaka ny asa vitan’ny kaominina Ambavahaditokana, distrikan’Antananarivo Atsimondrano nandritra iny taona nivalona 2017 iny.
CEOI Hifidy administera delege vaovao
17 taona ny nijoroana ankehitriny ny biraon’ny CEOI (Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien). Hifidy mpandraharaha mpanampy na administera delege izy ireo ato ho ato hatrehin’Atoa Michel Domenichini-Ramiaramanana.
« Journée Internationale du sport féminin » Hadinon’ny minisiteran’ny fanatanjahantena Malagasy tanteraka
Ankalazaina isaky ny andron’ny 24 janoary isan-taona nanomboka ny taona 2014 ny « « Journée Internationale du sport féminin », niainga tamin’ny fahatsapan’ny CSA na ny Conseil Suprême de l’Audiovisuel any Frantsa fa tsy dia voaresaky ny olona firy loatra ny vehivavy manao fanatanjahantena.
Raha sanatria …
Raha sanatria ka marina sy mitombina izay nolazaina sy navoakan’ilay vahiny tafavoaka sy tafatsoaka ny fonja lasa any Frantsa iny dia inona intsony no azo raisina amin’ity gasikara ity ?
Fanamboaran-dalana eto Antananarivo Kitoatoa tanteraka
Tsy misy izay tsy mikaikaika amin’ny faharatsian’ny lalana eto Antananarivo Renivohitra. Tapitra potika sy simba avokoa ny lalana rehetra aleha.
Fampidiran-ketra Maro ny fitomboana ho an’ny 2018
Notanterahana tetsy amin’ny tanoben’ny Varotra sy Indostria ny fampahafantarana ireo lalàna niova momba ny hetra. Nitondra fanazavana momba izany ny tale jeneralin’ny hetra,
Fandraharahana amin’ny fambolena Omen-danja ny fanofanana ny tanora
Nanomboka ny alatsinainy 22 janoary 2018 teo ilay atrikasa fanofanana momba ny fandraharahana ny amin’ny fambolena notanterahana tetsy amin’ny hotely le Pavé Antaninarenina. Noho ny hamaroan’ny tanora tsy an’asa manerana an’i Afrika no nanaovana ny fampiofanana, hoy ny Dr Samuel Mathey, manampahaizana manokana amin’io sehatra io.
Tovolahy iray vao erotrerony no tratra nisintona poketra tao anaty fiara anaty fitohanana teny Anosizato Atsinanana omaly. Saika matin’ny sabatra ilay ramatoa tompon’io poketra io,
AIRTEL Mpiasa nahavita be miisa 20 notolorana medaly
Fotoan-dehibe ho an’ny orinasam-pifandraisana Airtel ny faran’ny herinandro teo. Mpiasa miisa 20 eo anivon’ity orinasa iray ity voasokajy ho nahavita be no notolorana medaly, niasa 10 ka hatramin’ny 17 taona teo anivon’ny orinasa.